Ingebhe kwabangase badilizelwe izindlu | Eyethu News
Ingebhe kwabangase badilizelwe izindlu
“Sekuqaliwe kubhidlizwa izindlu zangasese.”
ilungu lomphakathi uMnuz Emmanuel Ndlovu, ekhombisa izindlu zangasese ezibhidlizwe inkampani yokwakha, nethembise ukuthi izobuya izobhidliza izindlu
AMALUNGA omphakathi wase-Acaciavale eMnambithi, athi aselala obenyoni njengoba umasipala i-Alfred Duma, usukhiphe umyalelo wokuthi kudilizwe izindlu abahlala kuzo.
Lamalunga eveze ukuthi ukuhlala kwawo kulezizindlu kweza ngemuva kokuba izindlu zawo zeRDP zashaywa isichotho sango-2012, okuze kube yimanje azilungisiwe futhi azikho esimweni sokuhlala abantu.
Omunye wesifazane othande ukuba igama lakhe lingadalulwa naye ohlala kulezizindlu, utshele leliphephandaba ukuthi okuhlongozwa umasipala kuyichilo, futhi akukhombisi ukuzwelana nabantu abasebenzisa ilungelo labo lokuvota.
“Uma besikhipha lapha bathi asiyephi ngoba izindlu esaphuma kuzo zalinyazwa isichotho sango-2012, ngenkathi sisahlala kuzo bezinetha amanzi angene endlini amanzise impuphu kanye nokudla kwabantwana. Okwesibili zinobungozi ngoba uma unyakazisa umnyango, kunyakaza konke nodonga okukhombisa ngokusobala ukuthi izingane zizogxotshwa udonga zilimale. Sinabantwana abancane lapha, uma siphuma bathi asiyephi ngoba ezinye izingane zethu ziyafunda lapha edolobheni. Nkosi yami yazi ukube umuntu uyavuswa emangcwabeni ngabe siyamvusa umama uKhanyisile Sibisi, ngoba uye kuphela ubekwazi ukusibheka asinakekele noma sihlaselwe yimvula ubefika ngakusasa azobheka ukuthi silale kanjani,” kubeka lelilungu.
. Esithombeni amalungu omphakathi wase-Acaciavale onovalo lokuthi azokhishwa ezindlini.
Kanti uMnuz Thembinkosi Emmanuel Ndlovu ohlala kulezizindlu, yena ubeke kanje ngesikhathi ekhuluma ne-Eyethu: “Mina lapha ngifike ngokusebenza ngakho angikhathazekile ngami, engikhathazeke ngabo yilaba aba yizakhamizi zalapha. Kungcono kuthiwa umasipala uma ebakhipha lapha uzobafaka ezindlini esezilungisiwe, manje uthi bazoyaphi uma ebakhipha ngoba abanandawo yokuhlala. Labantu bakhankasa kabuhlungu uma befuna ukuvotelwa ngoba bakhankasa ngokuthi bazolungisela abantu izindlu, uma sebevoteliwe bese beqala behlukumeza abantu. Asisho ukuthi sifuna ukuhlala ngenkani lapha, kepha okungenani abasinike isikhathi esanele sikwazi ukuqoqa sifune nendawo entsha, manje singayithathaphi imali yerent?” kubuza uGatsheni.
Imizamo yokuxhumana noMasipala yonke ibhuntshile njengoba izingcingo bezikhala zingabanjwa.
Ishiye ababili beshonile ingozi